Ever kumbova 'Super Bowl Sunday' kana kupupura chipikiri kuruma NFL pedza?
Ehe, tiri kutaura pamusoro quintessential bhora remakumbo ruzivo, pamu yokunyanyisa muswe gaiting uye vaneshungu musoro pamusoro kwemotokari. Zviri pano vakomana – pasi FIFA World Cup yasvika!
Mukombe nyika fivha richisimuka, punters mumunda vachitamba zvinoenda zvose kuti mari iri pamusoro rinorema sezvisingaiti uye mbambo. Zviri pachena kuti kutaura kuti apo pane chido nokuda mutambo, ipapo akasungwa kuva vakagumbuka kana maviri kuti anogona kuzarura gwara vachitamba iyi kutamba pamusoro.
tsime, sezvo shoko inoenda; iwe kuhwina vamwe, iwe neupenyu vamwe - zvose chikamu mutambo!
Iwe Bet ndizvo!
Ndiri guessing iwe kare kuziva pana kutema mumugwagwa nzvimbo zvechokwadi. Ngatitorei ichi rimwe danho.
Sei pamusoro isu kuongorora misika siyana nzvimbo izvi kushanda kubva? Ngatitaurei vanozopinda mariri ipapo.
Soccer Betting Sites Bet Blog Will Mberi Mushure bhonasi Table pazasi
Pane misika akawanda kuti nhabvu vachitamba nzvimbo kushanda kubva. Pano ari kutyora pasi mashoma kunzwisisa zviri nani:
Total Goals: Uyu multi-pamwero vachitamba nzira rinobatanidza munhu player Bet pamusoro uwandu zvinangwa zvichawanika scored mune machisa. The pamwero neeSultan kuti siyana kubva 0 -1, 2-3, 4-6 kana kunyange whopping 8 uye pamusoro nezvinangwa por mutambo. Ose pamwero kana Ipfungwa kusarudzwa nokuda mutambi anoiswa panguva yakasiyana shamisa.
Matambudziko kana Evens: Uyu maviri sandara vachitamba nzira umo mutambi kunodiwa kuti bheji kana uwandu zvinangwa scored nokuda zvikwata zviviri richava vasinganzwisisike kana kunyange nhamba.
Hafu nguva uye Full nenguva vachitamba nzira: Sezvo shoko rokuti, ichi vachitamba zano ane mutambi Bet pamusoro mugumisiro pakupera hafu kare uye azere mutambo. Mubatanidzwa Home, Swederai uye Away vari zviwanikwe, pamwe nemamwe kursy.
Rairira chibozwa: ikozvino ichi chinhu rokubvisa mumwe. Sezvo imi kunge kare wafungidzira, izvozvo anokumbira player bheji pamusoro chaizvoizvo zvibodzwa chomutambo. sezvaitarisirwa, nzira iyi ine yakakwirira kusakundika ukapisa murwi naro uye kunogona kuva dzaona nzira hombe mari-kunze.
Aaa, nezvose mashoko kuuya nzira yenyu, unofanira sokuti seshasha punter kare Eh?
Soccer Betting Sites Blog nokuda Sports.expresscasino.co.uk. Rambai What iwe kuhwina!